Deg Deg) Madaxda DG & DF oo ku heshiiyay xilliga la dooranayo xildhibaanada Baarlabaanka | SMC
Home WARARKA MAANTA Deg Deg) Madaxda DG & DF oo ku heshiiyay xilliga la dooranayo...
Deg Deg) Madaxda DG & DF oo ku heshiiyay xilliga la dooranayo xildhibaanada Baarlabaanka
MW Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Hoggaanka maamul goboleedyada ayaa isla fahmay kuna heshiiyay dhismaha guddi isku-dhaf ah oo maamuli doona doorashooyinka guud ee dalka sida MOL aay ogaatay.
Waxaa sidoo kale lagu heshiiyay qodob si cad u qeexaya jadwalka xulista xildhibaanada labada aqal ee Baarlamaanka, waxaana loo jaangooyay in aqalka sare doorashadiisa ay bilaabato 15-ka October lana soo afjaro 15-ka November.
Waxaa sidoo kale lagu heshiiyay in la sameeyo GXKH (Guddiga Xalinta Khilaafaadka) Kaasoo noqon doono guddi isku dhaf ah oo xubnaha ka mid noqonaayo aay ka wada imaanaya Dowladda Federaalka & Dowlad Goboleedyada
Heshiiska dhexmaray labada dhinac ayaa mugdiga ka saarayaa heshiiskii bartamahii bishii lasoo dhaafay lagu gaaray magaalada Muqdisho.
Doorashada la aadi doono waa mid aan ka duwaneyn doorashadii 2016, waxaana awood qeybsiga uu noqonayaa nidaamka 4.5. Waxaa meesha laga saaray in doorashada lagu galo nidaamka Xisbiyada Badan, waxaana soo dooranaya Xildhibaanda Aqalka Hoose 101 ergo oo ka imanayaa qabaa’ilada aay ku matalaan nidaamka 4.5, halka Aqalka Sare aay soo dooran doonaan Baarlabaanka Dowlad Goboleedyada.
Beesha Caalamka & Madaxda Madasha Xisbiyada ayaa ka biyo diiday muddo kororsi uu damacsanaa MW Farmaajo, waxaana Beesha caalamka ku qasabtat hogaamiyayaasha DG & DF in aay ka heshiiyaan wax walba oo dhexdooda ah si dalka aay uga dhacdo doorasho Bisha Febraayo ee sanadka foodda nagu soo haya ee 2021.
Previous articleSacuudiga oo soo saaray shuruudo cusub oo Cumrada ah
Next articleDagaal ka dhacay Shabeellaha Hoose & khasaaro ka dhashay